Kroasia, Serbia : Sainan’ny fisakaizàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2019 9:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, srpski, 日本語, македонски, Magyar, English
Zara raha nisy herinandro monja taorian'ny nankalazàn'i Kroasia tamin'ny fomba ofisialy ny faha-16 taonan'ilay hetsika miaramila “Tafiotra” [amin'ny teny frantsay], nandroahany Serba maherin'ny 200 000 hiala an'i Kroasia, tamin'ny tranon'izy ireo izay mazàna no efa an-jato taona no niorenany, tanora roa avy ao Serbia sy Croatia no niaraka nanamboatra saina natambatra avy amin'ny an'ny firenena roa tonta, ho toy ny marika famerenana fihavanana eo amin'ireo firenena roa ireo.
Anja Blazevic sy Stefan Guzvica, izay samy mandray anjara aminì'ilay fiofanana ara-javakanto ao Gvozd, Kroatia, izay toerana namoronana io saina io, tsy ela akory izay, no nanazava [amin'ny teny kroaty] tamin'ny Vecernji.hr, gazety iray malaza ao Kroasia, ny antony nanosika azy ireo hanao izany :
Mankaleo anay ireo fifandirana noho ny resaka nasionalisma […] manirikiry anay ny fitanisàna tsy mitsahatra ny lasa, nefa tsy misy olona mihevitra ny hoavy. Mahatsiaro hadisoam-panantenana noho izany izahay, ary noho izany dia nanapaka hevitra ny hanao ezaka mba hahafahana manorina fifandraisana am-piralahaliana bebe kokoa eo amin'ny firenena roa tonta, na farafaharatsiny ho tandindona famantarana fotsiny aza.
Noforoninay ilay saina mba hiantsoana ny fitiavana sy ny fandeferana avy amin'ny vahoakan'ny firenena roa tonta. Fantatray fa hiteraka fanehoankevitra marobe sy resabe ilay saina, saingy izany no antom-pisian'ireo fiarahamonina demaokratika. Nanomana dika marobe tamin'ilay saina izahay, ka isan'izany ilay iray mihofahofa ao amin'ny tobinay ao Gvozd, iray hafa ho alefa any Serbia ary hafa maro nomena ireo namanay.
Maherin'ny 850 ireo mpamaky naneho hevitra tamin'ilay lahatsoratra. Ireto ambany ireto ny sasantsasany tamin'ireny fanehoankevitra ireny.
Ao ambadik'io ireo ONG mahazo fanohanana ara-bola avy amin'ny vahiny mikendry ny hanangana vondrom-piarahamonina vaovao hanindriana ny Kroaty. Saingy, taorian'ireo Yogoslavia roa izay tsy fahombiazana feno rà nandriaka, tsy mbola nahazo lesona ireo izay miasa miketrika izany, na kely aza. Tsy msy ifandraisako amin'ireo Serba na kely aza, tsy mbola tany Serbia mihitsy aho..ary tsy faniriako mihitsy ny hisian'ny olona hitambara amin'izy ireo.
Ny dingana voalohany dia ny hoe mankatò ny fisian'i Kroasia i Serbia, indrindra fa ireo izay niaina tao Kroasia nandritra ny fotoana lavabe.
Ny dingana faharoa dia ny fangatahan-dry zareo famelàna noho ireo heloka bevava rehetra nataony tany Kroasia, tsy nandritra ilay ady farany iny.
Ny dingana fahatelo dia ny fandroahana azy rehetra hiala tao Kroasia.
Amin'izay fotana izay, afaka hanana fifandraisana tsara isika, ary tsy ovàna ny saina kroaty. Niady ho azy sy maty ho azy izahay.
[…] Tsy ilaintska velively ny ho mpisakaiza. Fa ny mifanohitra amin'izay, tokony ho mailo dia mailo isika, indrindra ireo Kroaty manoloana ny Serba, satria tsy ny Kroaty velively no nihantsy ady tamin'ireo Serba, fa vavolombelon'ny herisetra avy any atsinanana isika rehetra […]
Tokony hovonoina any daholo izy rehetra ireo mba tsy ho ny taranaka sy ny zafikelintska no hovonoiny any aoriana.
Adala ianareo… Dia mihevitra ve ianareo fa hoe mety no fahitànay an'io saina io ary tianay ilay izy? Tsy hitako izay hambara.
[…] Fa maninona no ity, ry Kroaty malalako rehetra ? Tsy hisy mihitsy olona eto ambonin'ny tany hangataka famelàna ! […] Manandanja lavitra noho ny lasa ny hoavy, na inona na inona nandrafitra azy. Afaka nosorohana tsara ny ady raha toa ka naniry izany ireo politisiàna tao anatin'ireo Repoblika fahiny [tao Yogoslavia]. Saingy indrisy, tsy nisy tombontsoany izany satria sy hampanan-karena na iray aza tamin-dry zareo. Izany no marina rehetra manindrona, ry zareo a, mba hendry tsara amin'izay. Fotoana izao.
Naverin'ny gazety serba mpiseho isanandro Blic [serba] ilay vaovao, izay nahazo fanehoankevitra maherin'ny 600. Ireto ny sasantsasany.
Tohanako daholo izay fandraisana andraikitra mitsinjo ny hafa, mangingina, ho an'ny fiarahalahiana, fo an'ny hatsaram-panahy, mba hitondràna fanampiana… Tiako indrindra raha mba tsy hiverina intsony ireo ratsy rehetra […]
O ry zalahy a, fa inona no tsy metimety ao aminareo ao e? Mba adinoy amin'izany ny lasa ! Banjino ny hoavy ary avelao ny taranatsika mba hiaina am-pilaminana sy tsy misy fankahalàna.
Tokony hahafahan'ireo rehetra mankahala na sempotry ny fankahalàna misy ao anatiny izany, na inona na inona zom-pirenena ananany, fa tena tsy azoko hoe maninona ry zareo no te-hiditra ho ao anatin'i Eoropa
Ilay Serba biloagera Strongman koa namerina namoaka [serba] ilay vaovao, ary olona maherin'ny 80 no naneho hevitra tao aminy.
Mankasitraka an'ireo tanora. Mba misy masoandro mamiratra kely ao anatin'ireo Balkàna efa tampin-dalàn-kaleha
Looping nanoratra hoe:
Tsara no fahitako ilay hery nanosika, saingy mila miaro ny ainy ireo namorona azy iny.
Tsy manao afa-tsy ny mamaky sy misaina aho hoe impiry no nihaona ireo tanora Israeliàna sy Palestiniàna. Daia inona no tohiny ?
Fankasitrahana feno avy amiko noho ny fahamatorana sy ny fahasahiana. Tohanako ryzareo. Eny e, mba misy olona miezaka hanao fampihavanana. Antenaiko mba ho fanombohana fotsiny io hetsika io . Atolotra anareo ny voninahitra rehetra. Mbola haharitra hafiriana indray no hifankahalàntsika e ?
Nisarika sain'olona an'aliny tao Kroasia sy Serbia ity raharaha ity, ary hatramin'ireo sisa any Balkàna, izay namela ny fanehoankevitr'izy ireo tany anatin'ireo sehatra sy karajia marobe tato anatin'ny andro vitsivitsy.